I-China Natural Paper Straw Bag i-Eco-friendly Cosmetic Organiser Zipper yakutya Yenza ibhegi mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Iphepha leNdalo elenzelwe i-Eraw-friendly yeCosmetic Organiser Zipper yakutya Yenza ibhegi
Imilo ayikho nkulu kangangokuba kulula ukuyiphatha nokuyigcina, ngaphandle kwayo, intle kwaye ikhethekile kwi-unisex ukuyisebenzisa. Ityali yinto yendalo kwaye ihlangabezana nemithombo yamanzi "yendalo esingqongileyo." Isingxobo sayo yinto efanayo naleyo yomzimba. Ingxowa yonke yendalo kwaye ihlangabezana namanzi "okusingqongileyo".
I-L22 * W8 * H15cm
Iinkcukacha zeNtloko yeZip
Isingxobo semvelo siyinto yendalo kwaye siyahlangabezana neemfuno “zokusingqongileyo”. Isitsala yinto efanayo naleyo yomzimba. Ibhegi yonke yendalo kwaye ihlangabezana neemfuno "zobume bendalo".
Egqithileyo I-Eco-friendly cosmetic Bag Isilungisi seZiphu kunye neTassel Puller
Okulandelayo: I-Natural Paper Straw Eco-friendly umququzeleli wezithambiso othatha isikhwama esenza ibhegi